IGAD oo ku baaqday in dib loogu laabto wada hadallada | KEYDMEDIA ONLINE
IGAD oo ku baaqday in dib loogu laabto wada hadallada
War ka soo baxay Urur goboleedka IGAD, ayaa lagu muujiyay walaac ka dhan ah dagaalladii shalay ilaa xalay ka socday magaalada Muqdisho, ee Caasimadda Soomaaliya.
DJIBOUTI, Djibouti - Urur goboleedka IGAD ayaa sheegay in ay aad uga waalaac sanyihiin dhacdooyinkii u danbeeyay ee ka dhacay Muqdisho, waxayna sheegeen in xalku ku jiro is fahan si loogu dareero doorasho loo dhanyahay.
Dhamaan dhinacyada ayaa loogu baaqay in ay is xakameeyaan dibna ugu laabtaan miiska wadahadallada, si loo xalliyo xasaradaha kacsan.
“IGAD waxay si qoto dheer uga walaacsan tahay rabshadaha ka socda magaalada Muqdisho waxayna ku boorinaysaa dhamaan dhinacyada inay is xakameeyaan, dibna ugu laabtaan wadahadalka, joogteeyaanna dadaallada lagu xalinaayo qalalaasaha doorashada” ayaa lagu yiri warka ka soo baxay IGAD.
Baaqa Ururka ay Soomaaliya xubinta ka tahay ayaa imaanaya kadib dagaalo qaraar oo shalay ilaa xalay ka socday Muqdisho, waxaana hadda iska soo daba dhacaya baaqyada ceyn kaan ah oo adduunku dhinacyada is haya ugu yeerayo nabadda iyo ku laabashada miiska wadahadallada.